बिदेशमा बिभिन्न पदका लागि हजारौ संख्यामा नेपाली कामदारको माग ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/बिदेशमा बिभिन्न पदका लागि हजारौ संख्यामा नेपाली कामदारको माग !
वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेसियाका लागि कूल ३१ हजार २०१ जना कामदारका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलेपछि एकैपटक ठूलो संख्यामा कामदार माग भई आएको हो । नेपाली दूतावास मलेसिायले समेत उक्त माग संख्यालाई प्रमाणकिरण गरी कामदार ल्याउनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि मात्रै १७ हजार ११६ को माग आएको छ । यस्तै सेवा क्षेत्र जसमा सुरक्षा गार्ड सहितको संख्या १० हजार १८३ रहेको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा १ हजार ४७५, प्लाण्टेसनमा १ हजार ३९७ र निर्माणतर्फ १ हजार ३० जनाको माग आएको छ ।
दूतावासले मागपत्रको प्रमाणिकरणको कार्यलाई सरल, पारदर्शी र चुस्त बनाएको जनाएको छ ।
जापानमा नर्सिङ केयरगिभरका लागि पहिलो चरणमा नेपाली जान नपाउने भएका छन् । जापान फाउन्डेसनले लिएको नर्सिङ केयरगिभरको सीप परीक्षणमा १५ जना र जापानी भाषा परीक्षणमा १२ जना सहभागी थिए ।
ती मध्ये भाषा परीक्षामा एक जना मात्र उर्तिण भए । नेपाल र जापानको श्रम समझदारीअनुसार नर्सिङ केयरगिभरमा जाने कामदारले नर्सिङ सेवासम्बन्धी भाषा र सीप परीक्षणमा उतीर्ण हुुनुपर्छ। अनलाइनमार्फत आवेदन दिएकामध्ये लक्की ड्रबाट छानेर जापान फाउण्डेसनले परीक्षा लिएको थियो।
कुन क्षेत्रमा जाने कामदारले कुन पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा दिनुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा परीक्षार्थी अन्योलमा परेर फेल भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विश्लेषण रहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
खरेललाई कँडेलको सुझाव: ‘सरकारी पेन्सन त्यागेर मात्रै सरकार विरोध गर्नुस्’